Kooxda Liverpool oo gaartay afar dhammaadka tartanka EFL Cup, kaddib guul ay ka gaartay Leeds United… + SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Liverpool oo gaartay afar dhammaadka tartanka EFL Cup, kaddib guul ay ka gaartay Leeds United… + SAWIRRO
(Liverpool) 30 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa gaartay afar dhammaadka tartanka English Football League Cup, kaddib markii ay 2-0 ku garaacday Leeds United oo marti ugu ahayd garoonka Anfield.
Kulankan ayaa qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0, inkastoo labada dhinac ay sameeyeen fursado goolal loo filan karay.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee kulanka, Liverpool ayaa la wareegtay hoggaanka ciyaarta waxaana gool koowaad u dhaliyey 76’daqiiqo Divock Origi kaddib markii uu lug ku dhammaystiray kubbad dadab ka soo qaaday Trent Alexander-Arnold, kulanka ayaana sidaas ku noqday 1-0 ay ku gacan sarreysay Reds.
Kooxda Liverpool ayaa la timid goolka labaad, waxaana 81’daqiiqo u dhaliyey 17-sano jirka Benjamin Woodburn, kaasoo ka soo kacay kursiga keydka, waxaana uu ahaa goolkiisii ugu horreeyey ee uu u dhaliyo kooxda waa wayn ee Liverpool, ciyaarta ayaana waqtigii loogu tala galay ku soo dhammaatay 2-0 oo ay ku adkaatay kooxda Liverpool.
Reds ayaana sidaasi ugu soo baxday afar dhammaadka tartankan EFL Cup markeedii 17-aad waana kooxda ugu badan, waxaana ay sugi doontaa kooxdii ay ku aadi lahayd semi-final-ka tartankan.
TOOS u daawo: Liverpool vs Leeds, Torino vs Pisa - LIVE (Shaxda sugan)
Ozil iyo Di Maria oo wada xiiseynaya inay dib ugu laabtaan Real Madrid